पोखरामा भेटियो एलिएन जस्तै निधार नभएको बच्चा, १४ महिनामा साढे २ किलो तौल (भिडियो) – Naya Pusta
पोखरामा भेटियो एलिएन जस्तै निधार नभएको बच्चा, १४ महिनामा साढे २ किलो तौल (भिडियो)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ आश्विन १२, आईतवार १६:११ [post-views]
पाल्पाकी सुकमाया परियार बिगत तीन महिना देखी पोखराका सडक र मन्दिर अगाडी भौतारिरहेकी छन् । १४ महिना अघि मात्र आफ्नो कान्छो सन्तानको रुपमा गणेश परियारलाई पाएकी सुकमाया अहिले उपचारको अभावमा हैरानीमा छन् ।
गणेश एक साधारण बच्चा छैनन् । जन्मदा नौ सय ग्राम र अहिले १४ महिना पुग्दा सम्म जम्मा साढे दुई किलो तौल भएको बच्चा बोक्दै सुकमाया उपचारमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरिरहेकी छन् । गणेशको अनुहार पनि अरु बच्चाको भन्दा भिन्न छ ।
देख्ने र भेट्नेहरुले एलियन जस्तै भएको पनि भन्छन् कतिपयले निधार नै नभएका बालकलाई भगवानको रुप मन्ने गरेका छन् । बाटो हिड्ने देख्नेहरुले केही रुपौया त दिन्छन् तर त्यसले पोखरामा बस्न र खान मात्र ठिक्क छ ।
बच्चाको शारिरिक बनावट अनुसार नै हरेक महिना अस्पतालमा जाँच गराउनुपर्छ तर अस्पताल लैजाने खर्च उनीहरुसंग छैन । फोक्सोमा निमोनियले आक्रमण गरेको र त्यसको लागी काठमाण्डौं जानपर्ने डाक्टरको सल्लाह छ तर सुकमाया भन्छिन् पैसा छैन कसरी जाउँ ?
रबि लामिछानेको नेतृत्वमा बन्दै गरेको रास्कोट अस्पतालका लागि बेल्जियमबाट १७ लाख सहयोग
कुन दिशामा कत्रो बनाउने घरको मूलद्वार ?
यो साता निकै राम्रो छ यी ९ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा अग्नी सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित
राष्ट्रियसभा सदस्यमा गण्डकीबाट नेकपाका उम्मेदवार विजयी
काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएकोमा युवा नेता थापाको असन्तुष्टि